OUKITEL C17 Pro ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ၊ ယူရို ၁၃၀ အောက် | Androidsis
ဒီနေ့စမတ်ဖုန်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်အမြဲတမ်းကောင်းသောသတင်းဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းအသစ်များကိုစမ်းသပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သည်။ ဤကိစ္စတွင် OUKITEL ရှိကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူတကွလက်တွဲလုပ်ဆောင်သည်။ အသစ်စက်စက် OUKITEL C17 Pro ကိုစမ်းသပ်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ စမတ်ဖုန်းအပြီးတွင်စမတ်ဖုန်းသို့မည်သည့်လက်မှတ်များရောက်ရှိနိုင်မည်ကိုကြည့်ခြင်းသည်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်။
OUKITEL ၎င်းသည်ကြီးမားသောဘက်ထရီများရှိသည့်တယ်လီဖုန်းများပြုလုပ်ရာတွင်လူသိများလာပြီးနာမည်ကောင်းပင်ရရှိခဲ့သည်။ ဒါကသူကအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ခေတ်မှာစွမ်းအားပြည့်ပြီးယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့စမတ်ဖုန်းတွေဖန်တီးနိုင်ပြီ။ OUKITEL C17 Pro သည်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပြီးယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုသင်ပြောပြပါမည်။
1 OUKITEL C17 Pro၊ သင်လိုအပ်သမျှ
2 OUKITEL C17 Pro ၏ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်
3 OUKITEL C17 Pro သေတ္တာပါ ၀ င်သောအရာများ
5 OUKITEL C17 Pro ရဲ့အတွင်းပိုင်းကဘာလဲ။
10 OUKTEL C17 Pro အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
11 OUKITEL C17 Pro ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများ
OUKITEL C17 Pro၊ သင်လိုအပ်သမျှ
အတွေ့အကြုံအနည်းငယ်သာရှိသောကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်တွင်ခြေကုပ်ရယူရန်များစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အဲဒါကိုအောင်မြင်ရန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သောအမှတ်တံဆိပ်များအတွက်လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သောအရာတစ်ခုခု။ သင့်ရှေ့တွင်သင်ယူစရာများစွာရှိပြီးတိုးတက်မှုအတွက်နေရာများစွာရှိခြင်း၏အားသာချက်နှင့်အတူ။
ဤဝုိင်းများနှင့်အတူ OUKITEL သည်၎င်း၏ထပ်မံလွှတ်တင်ခဲ့သည် C17 Pro ကို။ တစ်ဦး မကြာသေးမီက၏တိုးတက်လာသောဗားရှင်းလွန်ခဲ့သောသုံးလက C16 Pro ကို။ ရှုထောင့်တိုင်းကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ထားသည့်ကိရိယာသည်သင်ရနိုင်သည့်စျေးနှုန်းကိုသင်ယုံကြည်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ Amazon မှာအခုဝယ်လိုက်ပါ အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း။
သင်ဟာရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘဲသင့်ကိုအရာအားလုံးကိုပေးနိုင်မယ့်ဖုန်းကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်။ အပြုသဘောတိုင်းရှုထောင့်၌ထရပ်နိုင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်။ ထိုလည်းထွက်လှည့်သော စျေးနှုန်းယှဉ်ပြိုင် ကဟာသနဲ့တူပုံရသည်အထိ။ OUKITEL C17 Pro သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည် သင်ရှာနေသောစမတ်ဖုန်းဖြစ်လာရန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း.
OUKITEL C17 Pro ၏ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်
အစမှစ။ အဘယျသို့ ပထမတစ်ချက်မှာရပ်တယ် OUKITEL C17 Pro ၏အစဖြစ်သည် သင့်မျက်နှာပြင်။ ဒီအရွယ်အစားရှိတဲ့စမတ်ဖုန်းမှာမမျှော်လင့်ထားတဲ့အရွယ်အစား၊ format နဲ့ resolution ။ အဆိုပါမေ့လျော့ခြင်းမရှိဘဲ ရှေ့ panel ကိုမူတည်ပြီး တင့်ကားများကိုအမြင့်ဆုံးသို့ညှစ်ခြင်းဖြင့်ရရှိသည်။
ရှေ့ကင်မရာကိုရှာရန်အဖြေသည်သင်၏ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိအထူးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Apple ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပင်ရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်သွားသည်။ ကျနော်တို့ဘယ်လိုကြည့်ပါ C17 Pro သည်ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိအပေါက်လေးတစ်ခုကိုရွေးချယ်သည် အကွာအဝေး၏အများဆုံးအသိအမှတ်ပြုထိပ်၏စတိုင်၌တည်၏။ ဒါပေမယ့်သူကဒါကိုထောင့်မှာနေရာချခြင်းအားဖြင့်သူကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ကြိုက်တယ်။
စောင့်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ထိပ်ဆုံး ပထမဆုံးအမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် OUKITEL C17 Pro တွင်အနီအောက်ရောင်ခြည် port ရှိသည်ဟုယုံကြည်သောအမှားကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းကဲ့သို့မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်အဝေးထိန်းထိန်းချုပ်မှုကဲ့သို့အပလီကေးရှင်းများကြောင့်မည်သည့်အခါမျှထိခိုက်နာကျင်စေသည့်အရာမဟုတ်ပါ။ ကုမ္ပဏီအနည်းငယ်ကသိမ်းဆည်းရန်ဆုံးဖြတ်ထားသော“ အပို” တစ်ခုသည်စမတ်ဖုန်းများမှပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်လာသည်။
C17 Pro ၏ထိပ်တွင်ရှိသည် ၎င်းသည် proximity sensor အကြောင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကို "ပုန်း" ရန်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ သို့သော်၎င်းတို့ကိုရှေ့မျက်နှာပြင်နှင့်မျက်နှာပြင်အပြင်ဘက်ရှိစမတ်ဖုန်း၏ထိပ်တွင်ထားခြင်းကမူရင်းဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်ထိုအသိအမှတ်ပြုရန်ရှိသည် ကြောင်းအထက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်perfectlyုံ၎င်း၏ function ကိုလုပ်ဆောင်တယ် ကိရိယာကိုကျွန်ုပ်တို့မျက်နှာသို့ယူဆောင်လာသောအခါမျက်နှာပြင်မှောင်လာသည်။
el en ညာဘက်အထက်မှအောက်သို့ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည် အသံအတိုးအကျယ်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် elongated button ကို။ ရုံအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော သော့ခတ်သို့မဟုတ်ခလုတ်ကိုဖွင့် / ပိတ်ပါ။ အလွယ်တကူသုံးနိုင်သောလက်မခလုတ်များနှိပ်နိုင်သည်။ အဖြစ် ဘယ်ဘက်, ဒီသာအဘို့သိုထားခြင်းဖြစ်သည် ကဒ်အထိုင်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် SIM ကဒ်နှစ်ခုကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းသို့မဟုတ် micro SD မှတ်ဉာဏ်ရှိသည့် SIM တစ်ခုကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်ရှာနေသောမိုဘိုင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ OUKITEL C17 Pro ကိုယခုမှာယူပါ အမေဇုံအပေါ်။
ကြည့်ရတာ အောက်ခြေ ဘယ်၊ ဘယ်မှညာသို့ရှာသည်၊ က မိုက်ခရိုအဘို့အပေါက်အဆိုပါ port ကိုတင် နှင့် စပီကာတစ်ခု။ နှင့်အတူတစ် ဦး ကတင်ဆိပ်ကမ်းကို USB C ပုံစံ။ အသုံးပြုသူများမှတောင်းဆိုသောအရာသည်မော်ဒယ် ၂,၀၁၉ တွင် Micro USB အားသွင်းသည့်ဆိပ်ကမ်းရှိသေးသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် OUKITEL သည်ပိုမိုမြန်ဆန်။ ပိုမိုထိရောက်သောအားသွင်းစနစ်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်။
OUKITEL C17 Pro ၏နောက်ကျောတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ဦး စားပေးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည် ၎င်း၏အဓိကဆွဲဆောင်မှုတစ်ခု။ တစ် ဦး ကသပိတ်မှောက် သုံးဆဓာတ်ပုံကင်မရာ ဒေါင်လိုက်သင့်ရဲ့မှန်ဘီလူးနေရာချသော။ ထိုအခါနှင့်အတူ LED flash ကို သူတို့ကဘယ်ဘက်အထက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်လေးခုဒြပ်စင်တစ်လိုင်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဗဟို၌, ငါတို့ပိုမိုဗဟိုပြုရှိသည် လက်ဗွေဖတ်စက်.
OUKITEL C17 Pro သေတ္တာပါ ၀ င်သောအရာများ
ယခု OUKITEL C17 Pro ၏လေးထောင့်ကွက်ကိုကြည့်ရှုရန်အချိန်တန်ပြီဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်ထုတ်လုပ်သူများသည်သုံးစွဲသူများအပေါ်မည်မျှစဉ်းစားနေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပြီ။ ကျနော်တို့ပြီးသားသတိပေးခဲ့သည် မအံ့သြစရာမရှိပါ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ပိုပြီးယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့စျေးနှုန်းတွေကိုပေးနိုင်ဖို့အတွက်အဲဒါဟာပိုပိုပြီးတွေ့နေကျအရာတစ်ခုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည် cable ကိုအားသွင်းနေစဉ် နှင့်ဒေတာလွှဲပြောင်း format USB အမျိုးအစား C။ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းများအတွက်အားသွင်း connector ကို။ ကဒ်အထိုင်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ဂန္ "spike" ။ ပြီးတော့က USB Type-C မှ 3,5mm mini jack adapter ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးမဲ့နားကြပ်ကိုသုံးနိုင်အောင်။
အနည်းငယ်ပိုအနေနှင့် OUKITEL သည်ကျွန်ုပ်တို့အားတင်ပြသည် ပွင့်လင်းဆီလီကွန်လက် C17 Pro အတွက်ကောင်းမွန်သောအထူရှိပြီးမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းပစ္စည်းနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်ကုမ္ပဏီများနှင့်တွေ့မြင်နေရသည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ထုတ်လုပ်သူအများစုတွင်တွေ့ရလေ့မရှိပါ။
သင်၏ OUKITEL C17 Pro ကို Amazon တွင်အခမဲ့ပို့ဆောင်ပါ
ဒီ post ရဲ့အစမှာ OUKITEL C17 Pro ရဲ့မျက်နှာပြင်ကသတိမပြုမိပါဘူး။ ဒါဟာအားလုံးအထက်မှာထွက်ရပ် တစ်ချိန်ကနှင့်အဘို့အ obnoxious ထစ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ရှေးခယျြဖြေရှင်းချက်။ အထူးသဖြင့်၎င်းသည်ဝထ္ထုဖြစ်သောကြောင့်ထိုအချိန်၌အတော်အတန်ကောင်းမွန်စွာရရှိခဲ့သည်။ အက်ပဲကဆက်ပြီးဆက်ပြီးလောင်းနေ ဦး မှာဖြစ်ပြီးစမတ်ဖုန်းအသစ်တွေကနေဘယ်လိုပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတာကိုမကြည့်ခင်အထိလူအများကမုန်းတီးခံခဲ့ကြရတယ်။
ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်ကွင်း၏ဘယ်ဘက်အောက်ထောင့်တွင်အပေါက်တစ်ခုတွေ့ရသည်။ ရှေ့ကင်မရာ၏မှန်ဘီလူးကိုသာတပ်ဆင်ထားသည့်အပေါက်ငယ်တစ်ခု။ ပြီးတော့ဒါကပစ္စည်းကိုတကယ်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေတယ်။ ငါတို့မှာဖန်သားပြင်ပေါ်မှာဒီအပေါက်သေးသေးလေးတစ်ခုပဲရှိလို့ပါ ကိရိယာ၏အပေါ်ဆုံးဘောင်ပေါ်ရှိ proximity sensor ၏မှန်ကန်သောတည်နေရာ.
ငါတို့မှာaကောင်းသောအရွယ်အစား display ကို ကြောင်းတစ်ထောင့်ဖြတ်ရောက်ရှိ 6,35 အချိုး: 19.5 နှင့်အတူ9လက်မ။ ဒါဟာ၏စုစုပေါင်းရှေ့ panel ကို၏areaရိယာယူထားသော 82%တစ်ဦး ထေိုအချိုး OUKITEL သည်ပစ္စည်းတစ်ခုစီနှင့်တိုးတက်ရန်စီမံသည် အဆိုပါ panel ကိုဖြစ်ပါတယ် LCD IPS ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူ 720 x 1560 px HD +။ ပြီးတော့ဒါကသိပ်သည်းမှု၊ 271 dpi.
OUKITEL C17 Pro ရဲ့အတွင်းပိုင်းကဘာလဲ။
ကျနော်တို့ smarpthone ၏အရေးအပါဆုံးအချက်များထဲကတစ်ခုထည့်ပါ။ ကြည့်ရတာတင့်တယ်လှတယ်၊ သုံးစွဲသူတွေဟာဖုန်းတစ်လုံးတီထွင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုပိုပိုပြီးအာရုံစိုက်နေကြတယ်။ အပူလွန်ကဲခြင်းသို့မဟုတ်ချိတ်ဆွဲခြင်းပြproblemsနာများမရှိဘဲမည်သည့်လုပ်ငန်းကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဆိုခြင်းကိုသိရှိရန်မှာအသေးစိတ်မသိပါ။
ကိရိယာတည်ရှိရာအကွာအဝေးနှင့်အထူးသဖြင့်၎င်းကိုဘောင်ခတ်ထားသည့်စျေးနှုန်းအကွာအဝေးပေါ် မူတည်၍ ၀ ယ်လိုအားသည်တက်သည်သို့မဟုတ်ကျဆင်းသည်။ OUKITEL C17 Pro သည်အသုံးအများဆုံးစမတ်ဖုန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုကို အခြေခံ၍ ယေဘူယျအားဖြင့်သူ၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်အလွန်မြင့်မားသောအဆင့်သို့တက်လှမ်းရန်မသင့်ပါ၊ သို့သော်ဤအရာသည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။
OUKITEL သည်ဤအဖွဲ့အတွက် MediaTek ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူဤတွင်ရှိသည်။ အထူးသကျနော်တို့ကိုရှာပါ MediaTek Helio P23 (MT6763V)။ ၎င်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာစျေးကွက်ထဲသို့မရောက်ရှိနိုင်သေးသော်လည်း၎င်းကိုတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည် Doogee, Ulephone သို့မဟုတ် Leagoo စသည့်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။ Alcatel သည်၎င်းကိုမကြာသေးမီက 3X မော်ဒယ်လ်တွင်ပါ ၀ င်ရန်အလွန်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောရလဒ်အဖြစ်ထည့်သွင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
La စီပီယူ ကပါဝင်သည် ARM Cortex A4 + 2.0 x 53 GHz + ARM Cortex A4 နှင့် 1.5 x 53 GHz။ တစ် ဦး က Processor ကို Octa Core သည် 2.0 GHz နှုန်းဖြင့်လည်ပတ်သည် နှင့်၏ဗိသုကာရှိပါတယ် 64 -bits.
ကျွန်တော်တို့မှတ်ဉာဏ်တစ်ခုတွေ့ခဲ့တယ် 4GB RAM ကြောင်းperfectlyုံတစ်စွမ်းရည်များကပြည့်စုံသည် 64GB သိုလှောင်မှု။ သိုလှောင်ရန်အတွက် slot ကို သုံး၍ တိုးချဲ့နိုင်သည် Micro SD မှတ်ဉာဏ်ကဒ်။ ၏အစိတ်အပိုင်းအတွက် ဂရပ်ဖစ် အဆိုပါ OUKITEL C17 Pro ကိုတစ် ဦး ရှိပါတယ် ARM Mali-G71 MP2.
ကျနော်တို့ကအခြားတရုတ်စမတ်ဖုန်း၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတွင်ဤအကြောင်းကိုမှတ်ချက်ချပြီးပါပြီ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကအာရှလတ္တီတွဒ်များမှစမတ်ဖုန်းများသည်ဓာတ်ပုံဆိုင်ရာကဏ္weakတွင်အားနည်းနေသောကြောင့်နာမည်ရခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၎င်းအညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားနိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့သည်ကိရိယာများကိုမှန်ဘီလူးများနှင့်ကင်မရာများထောက်ပံ့ရန်သက်သေပြသည့်ထုတ်လုပ်သူများအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။
ဓာတ်ပုံအပိုင်းသည်အဓိကအရေးပါမှုကိုရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးလူမှုကွန်ယက်များသို့အကောင်းဆုံးဓါတ်ပုံများကိုမတင်ပို့နိုင်ပါကဤစမတ်ဖုန်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ဒီသင်ခန်းစာကိုလေ့လာပြီးနောက် OUKITEL နှစ်ခုလုံးသည်တူညီသောအကွာအဝေးရှိအခြားကုမ္ပဏီများနည်းတူ Samsung ကဲ့သို့သောလက်မှတ်အာရုံခံကိရိယာကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဓာတ်ပုံအပိုင်းတွင်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာစေမည့်အရာ၊ နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူအားအကျိုးပြုမည့်အရာ။
၏နောက်ကျောမှာ OUKITEL C17 Pro သည်သုံးပွင့်ဆိုင်အာရုံခံကိရိယာနှင့်အတူ၎င်း၏ကင်မရာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရကျွန်ုပ်တို့သည်အလယ်အလတ်တန်းစားသို့မဟုတ်အဆင့်နိမ့်ဖုန်းများတွင်မတွေ့ရသေးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ။ ငါတို့မှာရှိတယ် Sony မှလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့်အဓိကအာရုံခံကိရိယာ။ ဆိုနီအာရုံခံကိရိယာ 2.0 focal aperture ပါ ၀ င်သော CMOS Exmor အမျိုးအစားနှင့် 13MP resolution.
ကင်မရာများ၏ဒုတိယ ကျွန်တော်တို့ကိုနှင့်အတူဖမ်းယူ၏ဖြစ်နိုင်ခြေပေးထားပါတယ် ကျယ်ပြန့်ထောင့်။ မှန်ကန်သောဖမ်းယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးဖြစ်နိုင်ခြေများကိုချဲ့ထွင်သောအပိုတစ်ခု။ နောက်ဆုံးအားဖြင့်ဦး တတိယကင်မရာ သငျသညျဖမ်းယူဖို့ခွင့်ပြုပါတယ် အတိမ်အနက်ကို အထင်ကြီးဓာတ်ပုံရိုက်ယူခြင်း။
ရှေ့၊ ကျနော်တို့မျက်နှာပြင်မှာတွေ့ရသောပတ်ပတ်လည်အပေါက်ထဲမှာ, OUKITEL C17 Pro ကိုတစ် ဦး ရှိပါတယ် 5MP resolution selfie ကင်မရာ။ ဘာမှမဆန်းပေမယ့်တောက်ပမှုမရှိဘဲသဘာဝအလင်းရောင်အခြေအနေများအောက်တွင်သိသိသာသာတိုးတက်ကောင်းမွန်သည့်ကောင်းမွန်သောဓါတ်ပုံများကိုပေးသည်။ ဓာတ်ပုံသည်သင့်အတွက်အရေးကြီးပါက OUKITEL C17 Pro သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီထက်ပိုပြီးယူရို ၁၃၀ ထက်မကတဲ့ Amazon ကို ၀ ယ်ပါ.
OUKITEL C17 Pro ၏နောက်ကျောတွင်အလွန်ထင်ရှားသောဤအံ့ဖွယ်ကင်မရာကိုစမ်းသပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်လမ်းများသို့ထွက်သွားခဲ့ကြပြီ။ ကင်မရာကောင်းစွာသူ့ဟာသူကာကွယ်ပေးသည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းမအံ့သြခဲ့ကြဘူးဆိုတာကိုတော့ဝန်ခံရမည်။ ၎င်းသည်အချို့သောအခြေအနေများတွင်တူညီသောအလယ်အလတ်တန်းစားရှိအခြားစမတ်ဖုန်းကင်မရာများထက်များလွန်းသော၊
သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကောင်းမွန်သောဓါတ်ပုံများကိုခံစားနိုင်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဒီကနေ့ကင်မရာအများစုလိုပဲ သဘာဝအလင်းအခြေအနေကောင်းမွန်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လျောက်ပတ်သောရိုက်ချက်များထက် ပို၍ ရလိမ့်မည်။ ဤအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အား OUKITEL C17 Pro ကင်မရာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဖမ်းယူနမူနာအချို့ကိုချန်ထားခဲ့သည်။
ဤဓာတ်ပုံတွင်, ကမ်းခြေပေါ်ခေါ်ဆောင်သွား, ကြည်လင်သောမိုးကောင်းကင်နှင့်အလင်းပဒေသာနှင့်အတူငါတို့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ အာရုံခံကိရိယာသည်အမြင့်ဆုံးကိုပေးနိုင်သည်. ပုံအရည်အသွေး၊ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်လက်တွေ့အရောင်များ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြာရောင်ရောင်ခြည်သံ၊ သဲများ၏တန်ချိန်များကိုperfectlyုံ ၀ န်းကျင်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပြီး၎င်းကိုတန်ဖိုးထားသည် ကောင်းသောအနက် နှင့်အကွာအဝေး။
ဤဓာတ်ပုံကိုလေ့လာပြီးသဘာဝအလင်းဖြင့်ရိုက်ကူးထားသောကမ်းခြေပေါ်ကဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီး အရောင်နှင့်ပုံသဏ္informationာန်သတင်းအချက်အလက်ကယ့်ကိုကောင်းလှ၏။ အနည်းငယ်တိုးခြင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိပ္ပါယ်အနည်းငယ်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ သို့သော်ယေဘူယျအားဖြင့်ရလဒ်မှာကန့်ကွက်မှု နည်း၍ အလွန်ကောင်းသည်။
အနီးကပ်အကွာအဝေးမှာယူဓာတ်ပုံတွင် အရာဝတ္ထု၏ ကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အတူ ငါတို့သည်လည်းဘယ်လိုကြည့်ပါ ကင်မရာကောင်းစွာပြုမူ။ ကွဲပြားခြားနားသောအရိပ်များကိုကျနော်တို့perfectlyုံတန်ဖိုးထားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့အရောင်တူညီတဲ့ပန်းကန်ပေါ်မှာသကြားဓာတ်ကိုတောင်ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားလေးမြတ်ကြပါတယ်။
ကျနော်တို့သဘာဝအလင်းနှင့်အတူဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်ခဲ့ကြပေမယ့် လျော့နည်းနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပြင်းထန်မှု၏နာရီ၌ကျနော်တို့ပြီးသားအချို့စောငျ့ရှောကျ အဓိပ္ပါယ်ကွာဟချက် အတူတူပင်။ ဆားငန်အောက်ခြေရှိငှက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ပါကပုံစံများကိုအခက်အခဲအချို့နှင့်ခွဲခြားနိုင်သည်။ တောင်မှ ရေ၌ထင်ဟပ်အရောင်များညှိုးနွမ်းစေပါ.
zoom ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပုံကအရမ်းများနေတယ်။ ဓာတ်ပုံများ၏နောက်ခံတွင်ပင်လယ်ရေငှက်များဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုရှင်းလင်းစွာခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် pixelation နှင့်အရည်အသွေးဆုံးရှုံးမှုထင်ရှားဖြစ်ကြသည်။ ဒီဂျစ်တယ်မှန်ဘီလူးသုံးပြီးလုံးဝကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့အရာ။
အိမ်တွင်းယူဓာတ်ပုံတစ်ပုံအတွက်ကောင်းသောအတုအလင်းနှင့်အတူပေမယ့်, ငါတို့လည်းလျောက်ပတ်သောရလဒ်များကိုရရှိသည်။ အဘယ်သူမျှမဆူညံသံသိသာသည်နှင့်အဓိပ္ပါယ်နှင့်အရောင်များကိုလည်းလုံလောက်သောဖြစ်ကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ရလာဒ်များမှာကောင်းမွန်ပြီး၊ OUKITEL C17 Pro ကိုရှာသောစျေးနှုန်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ပိုမိုပေးသည်ဟုပြောနိုင်သည်။
ကင်မရာအက်ပ် OUKITEL C17 Pro ရှိသည့်ဓာတ်ပုံများသည်ဓာတ်ပုံရိုက်ရာတွင်များစွာရှုပ်ထွေးမှုမရှိစေလိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့သင်ကပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုနှစ်သက်တဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ဆိုရင်မင်းကသိပ်ပျော်မှာမဟုတ်ဘူး။ App တစ်ခုတွေ့ပြီ ရိုးရှင်းတဲ့အဖြစ်အခြေခံအဖြစ်.
အ ရွေးချယ်မှုများ သူတို့လိုချင်တာကိုရွေးချယ်ရတာရိုးရှင်းပါတယ် ဓာတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယို၊ သို့မဟုတ် mono၊ "အလှအပ" သို့မဟုတ် bokeh မုဒ်ကိုယူပါ။ ငါတို့သည်လည်း configure နိုင်ပါတယ် မြင်ကွင်းပုံစံ နှင့်ပင် အဖြူချိန်ခွင်လျှာ သို့မဟုတ် ISO ။ သို့သော်အပြောင်းအလဲများသည်ရွေးချယ်စရာအနည်းငယ်နှင့်ပုံသေတန်ဖိုးများအတွင်းတွင်ရှိလိမ့်မည်။
OUKITEL စမတ်ဖုန်းများကိုလူသိများလာသည် ပထမမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြွင်းသောအရာကသူတို့ကိုခွဲခြားတဲ့အသေးစိတ်၏။ သူတို့မှာကြီးမားတဲ့ဘက်ထရီတွေရှိတယ် သူတို့အရင်ကတစ်ခါမှမမြင်ဖူးတဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုကတိပေးခဲ့တယ်။ အရမ်းက၏ကုန်ကျစရိတ်မှာ စမတ်ဖုန်းတွေဟာရှုထောင့်ထက်ကျော်လွန်နေတယ် နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအလေးနှင့်အတူ။
မကြာသေးမီနှစ်များကလုပ်ဆောင်ခဲ့သောကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ကုမ္ပဏီ၏လက်ရှိစမတ်ဖုန်းများသည်အရာရာတိုင်းတွင် ပို၍ မျှတမှုရှိသည်။ သူတို့သည် "ဘက်ထရီသက်သက်" မှသည်ကျော်ကြားသောအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စမတ်ဖုန်းများဖြစ်လာသည်။
ဒီကိစ္စမှာ, OUKTEL C17 Pro တွင် ၃,၉၀၀ mAh လီသီယမ်ပေါ်လီမာဘက်ထရီတပ်ဆင်ထားသည်။ အာမခံချက်တစ်ခုဝန် 24 နာရီထက်ပိုသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သည်မပြတ်မတောက် ပင်ဖုန်း၏အထူးကြပ်မတ်အသုံးပြုမှုအောင်။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောဘက်ထရီမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်လုံလောက်ပြီးဖုန်းကိုသာမာန်အဆင့်အတွင်းသို့ကျရောက်စေသည်။
ဒါ့အပြင်၊ ငါတို့အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ပြီးတော့၎င်းကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ charger တစ်ခုပါရှိပါတယ်။ ဆိုလိုတာကအချိန်တိုအတွင်းမှာရရှိနိုင်တဲ့ဘက်ထရီ ၁၀၀% ကိုငါတို့ခံစားနိုင်မှာပါ။ ပြီးတော့ဒါကငါတို့အရမ်းတက်ကြွနေပြီးကြီးမားတဲ့ဘက်ထရီစားသုံးသူတွေအတွက်စိတ်ချစရာအချက်ဖြစ်တယ်။ ဒီစမတ်ဖုန်းကမင်းအတွက်လိုအပ်လား OUKITEL C17 Pro ကို Amazon တွင်ဝယ်ယူပါ.
မှတ်ချက်ပေးစရာသိပ်မများသည့်အချက်နှစ်ချက်ကိုပေါင်းစပ်ချင်သော်လည်းသူတို့သတိမပြုမိစေရန်လုံလောက်သည်။ နှင့်စပ်လျဉ်း ဆော့ဖျဝဲကျနော်တို့ဗားရှင်းကိုရှာပါ Android 9.0။ နှင့်အခြားကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်နှင့်ဝသကဲ့သို့, သူတို့သည်စွန့်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည် မြင့်မားသောရာခိုင်နှုန်းဖြင့်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော Android ဖြင့် Android။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောအသုံးချပရိုဂရမ်များ၏အသွင်အပြင်နှင့်အနည်းငယ်မျှသာပြုပြင်ခြင်းအချို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
el en အသံရှုထောင့် ငါတို့လျစ်လျူရှုလို့မရဘူး 3,5mm jack ကို plug ကိုဖိနှိပ်မှု။ OUKITEL သည်သူတို့၏နောက်ဆုံးထုတ်များ၌သိမ်းဆည်းထားသောအရာ။ ပြီးတော့သူတို့က USB Type C charging connector နဲ့တောင်အတူတူရှိနေတယ် ကျန်ကုမ္ပဏီများရဲ့လက်ရှိအရှုံးကိုတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထိုမှတ်ချက်ပေးရန် ငါတို့မှာစပီကာတစ်ခုပဲရှိတယ်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်စက်၏အောက်ခြေတွင်၎င်း၏ဘောင်တွင်တည်ရှိသည်။ တစ်ခုနှင့်ရေတွက်ပါ လျောက်ပတ်သောအသံ တစ် ဦး ရောက်ရှိ လုံလောက်သောပါဝါအသံအတိုးအကျယ်ထက်ပို အချို့သောဗွီဒီယိုများနှင့်တေးသီချင်းများကိုနားထောင်ရန်။ ၎င်းသည်၎င်း၏တာ ၀ န်ကိုထင်ရှားပေါ်လွင်စေခြင်းမရှိဘဲပြည့်စုံကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်းချို့တဲ့မှုမရှိခြင်းကိုလည်းပြုလုပ်သည်။
၎င်းကိရိယာ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖော်ပြချက်အပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏ကျောဘက်တွင်တွေ့ရသောမှတ်ချက်ပေးပြီးဖြစ်သည် လက်ဗွေဖတ်စက်။ သူ၏ စစ်ဆင်ရေးမှန်ကန်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံသဏ္footာန်ခြေရာကိုအသိအမှတ်ပြုပါ အကျိုးရှိစွာနှင့်အစာရှောင်ခြင်း နှင့်ချက်ချင်းနီးပါး device ကိုသော့ဖွင့်။
ငါတို့လုပ်ရမယ် မျက်နှာသော့ဖွင့်ခြင်းစနစ်အထူးဖော်ပြခြင်း။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ် ဦး ကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ခဲ့ပါပြီ ယခင်မော်ဒယ်များကျော်ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှု။ မျက်နှာစာမှတ်ပုံတင်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာဖတ်ခြင်းပြfailureနာအချို့ကြုံတွေ့ရသည်။ သို့သော်၎င်းသည်နောက်ပိုင်းတွင်အသိအမှတ်ပြုမှုသည် ၁၀၀% ထိရောက်မှုရှိစေရန်လုပ်ဆောင်ပေးသည်။
ကိရိယာကိုသော့ဖွင့်ခြင်းသည်ချက်ချင်းပင်ဖြစ်သည် ကျနော်တို့မျက်နှာဆီသို့ device ကိုညွှန်ပြသည့်အခါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ မျက်နှာပြင်ကိုသက်ဝင်စေဖို့သော့ခတ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ရမှာကကင်မရာကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မျက်နှာကိုသိနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ အတွေ့အကြုံအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည် ၎င်းသည်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးလျင်မြန်ပြီးအလွန်လုံခြုံသည်။
OUKTEL C17 Pro အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
ပုံစံ C17 Pro ကို
Processor ကို MediaTek Helio P23 -Octa Core2GHz-
GPU ကို ARM Mali-G71 MP2
ဖန်သားပြင် ၆.၃၅” IPS HD + LCD
ကင်မရာ Sony 13 Mpx + Wide Angle +2Mpx Depth
ဘက်ထရီ 3.090 mAh ဘက်ထရီ
operating system အန်းဒရွိုက် 9.0
အလေးချိန် 302 ဂရမ်
ရှုထောင့် 75.3 158.8 မီလီမီတာမီလီမီတာမီလီမီတာ x x 8.8
စြေး 129.99 €
ဝယ်ယူ link ကို OUKITEL C17 Pro ကို
OUKITEL C17 Pro ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများ
နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များရှိသော်လည်းကောင်းမွန်သော resolution နှင့် brightness ရှိသော screen ကို
ကင်မရာ၏ bokeh အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာကောင်းမွန်စွာမစွမ်းနိုင်ပုံရသည်။ ၎င်းသည် software ပေါ်တွင်ပိုမိုမူတည်သည်။ ၎င်းသည်လာမည့် update တွင်တိုးတက်လာနိုင်သည်။
OUKITEL C17 Pro ကို
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » OUKITEL C17 Pro ကိုပြန်လည်သုံးသပ်
ဒီပစ္စည်း၏ကျယ်ပြန့်သောထောင့်ရှိဓါတ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်မည်သည့်အချိန်ကမျှတန်ဖိုးမထားခဲ့ပါ၊ ၎င်းသည် 13 mpx ရှိသည့်တစ်ခုတည်းသောအလုပ်လုပ်သောကင်မရာမဟုတ်ပါ။ ကျန်တဲ့နှစ်ခုကတော့အလှဆင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘာမှမလုပ်ဘူး။ ကျယ်ပြန့်တဲ့ထောင့်မရှိဘူး။ Blur effect က software ကစက်ဝိုင်းဖြစ်တယ်။
UI2တစ်ခုသည် Galaxy S10e, S10 နှင့် S10 + သို့မကြာမီရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်